अनुसन्धान नागरिक उडड्यन क्षेत्रमा नेपालका पहिलो पिएचडी होल्डर डा. भण्डारी
काडमाण्डौ । उड्डयनका आयामः नेपाली पर्यटनमा उड्डयनका आयामहरुको भुमिकाको मापन । सामान्य सुनिदा पर्यटनमा उड्डयन क्षेत्रको भुमिकाको कुरा बुझ्न गाह्रो नपर्ला । तर त्यो भन्दा बढि सामान्य व्यक्तिका लागि यी हरफहरु त्यति सजिला नहुन सक्लान ।
लेखनाथ भण्डारी, ४९ । कुराको सिलसिला चल्दै जाँदा उनले बेलिबिस्तार लगाउन थाले । २६ सालमा पोखराको हेम्जामा जन्मिएका हुन उनी । सानैदेखि असल थिए रे, तपाई कस्तो मान्छे भन्दा आफु सर्वभोगी भएपनि कुनैपनि प्राणीको दुःख देख्न नसक्ने स्वभावको भएको उनले प्रष्ट्याए । असल कस्तो भन्दा बाआमाले भनेको मान्ने, राम्रो संग पढ्ने भन्ने जमानामा उनी पनि यसैमा अव्बल ठान्थे । मध्यम स्तरको परिवार पोखरमा थोरबहुत पुर्खौली सम्पती, अंग्रेजी बोल्न जाने सम्पन्न ठानिने समयका उनी, डाँडापाखामा गोराछाला भएका बिदेशी डुलिरहँदा उनीहरु सँगै अंग्रेजीमा कुराकानी गर्थे पनि । पढाईमा अव्बल थिए, स्नातकोत्तर अंग्रेजीमा गरे, त्यतिले मात्रै चित्त बुझेन एमफिल र पिएचडी नै गरे । डा. थपियो भण्डारीको नाममा ।
यस्तोमा उनी यस्तो पात्र हुन, जो ‘सिंघानिया युनिभर्सिटी’ बाट नेपालमा पर्यटनमा उड्डयनको आयामको भुमिकाको बिषयमा बिद्यावारिधी (पिएचडी) गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन । यति मात्र हैन उनको उनीजस्तै डक्टरेट होल्डर व्यक्तिहरुको उपस्थीतिमा ‘ईन्टरसिटी ईन्भेष्टमेन्ट फण्ड’ का नामबाट पर्यटनलाई व्यवस्थीत बनाउने कर्म आज पनि जारी छ । हिमालय पर्वतमा गोरा छाला भएकाहरु उकालो चढ्दा उनीहरुसँगै पछि लाग्न उब्जिएका सपनाहरुलाई पछ्याउने भिडका बिच डा. भण्डारी एक उदाहरणीय छन । शुभकामना ।।